China Tanker Manhole Cover orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Jiasheng
Coverer Manhole Tanker
Size: 16'', 20'', 460.560.580
Vatan'ny vatana: firaka aliminioma, vy vy, vy tsy miova
Style: Clamp, Flange
YOJE RKG andian-doha manhole dia napetraka eo an-tampon'ny fitoeran-diloilo. Izy io dia ny fidirana anatiny amin'ny famoahana, ny fanamarinana ny fanarenana ny etona ary ny fikojakojana ny tanker. Afaka miaro ny tanker amin'ny vonjy maika.
Raha ny mahazatra dia mikatona ny valizy miaina. Na izany aza, rehefa mihena ny hafanan'ny solika, dia miova ny mari-pana any ivelany, ary miova ny tsindry amin'ny tanker toy ny tsindry rivotra sy ny tsindry amin'ny fantsona. Ny valizy mifoka rivotra dia afaka misokatra ho azy amin'ny tsindry rivotra iray sy ny tsindry banga mba hahatonga ny tsindry amin'ny tanky amin'ny toe-javatra mahazatra. Raha misy ny vonjy maika toy ny fihodinan'ny toe-javatra dia hikatona ho azy izy io ary afaka misoroka ny fipoahan'ny tanker koa rehefa may. Satria hisokatra ho azy ny valizy mahareraka maika rehefa mihombo ny tsindry anaty fiara vaventy amin'ny faritra iray.
Vatana: firaka aliminioma
Tanana fanerena: vy
Valizy fanalefahana: firaka aliminioma
Bokotra fiarovana: varahina
Anaran'ny vokatra Fonon-tsoavaly ho an'ny kamio kamio
Body Meterial Firaka AL
Ny haben'ny vatana 20 santimetatra
Valin'ny valizy vonjy taitra tampoka 10inches
Fanerena miasa 0.254MPa
Fanerena misokatra maika 21 PMa~32PMa
Max tahan'ny onja 7000m3 / h
Fomba fizarana Fifandraisana manidina
1. Ny lavadavaka tsirairay manarona valan'aretina mandreraka vonjy taitra dia misy valizy miaina.
2. Ny valizy miaina dia apetraka arak'izay takiana mba hamelombelona ny tanker. Ny fametrahana tsindry samihafa dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fandidiana.
3. Valizy fanararaotana vonjy taitra sy valizy miaina dia misy famehezana mandeha ho azy hisorohana ny loza sy ny fiparitahan'ny solika tsy ilaina.
4. Ny fisokafana roa dia mamela malalaka ny famoahana entona sisa tavela alohan'ny hanokafany tanteraka ny tabilao fanakonana.
5. Misy lavaka jamba roa voatokana ao amin'ny fonony lehibe azo apetraka amin'ny valizy fanarenana etona sy sensor optika.
Anaran'ny vokatra: Aliuminium firaka Sarom-baravaran'ny fiara mifono vy
Materia: Body: firaka aliminioma
Ny haben'ny sary: 560mm / 580mm
Media: Lasantsy, Diesel, solitany, sns
Sarom-bolo vita amin'ny tanky vita amin'ny firaka aluminium dia apetraka eo an-tampon'ny vovo-trondro misy ny kamio tanky, izay misy ny fiasan'ny rivotra sy ny fivelomana maika. Ny valizy miaina anaty dia afaka mandanjalanja ny tsindry ao anatiny sy ivelany mandritra ny fitaterana. Hosokafana ireo fitaovana mampihena vonjy taitra mba hamoahana ny tsindry raha toa ka mihombo be ny tsindry anatiny .Na dia sendra lozam-pifamoivoizana aza ny kamio tanky dia nikatona hatrany ny fisorohana ny valizy miaina anaty rivotra manoloana ny fitaovana mihoapampana, ny haino aman-jery ao anaty voan-menaka dia tsy azo ahondrahana, raha tsy izany mety hiteraka lozam-pifamoivoizana lehibe izany. Ny fonony manhole dia afaka mametraka valizy fanarenana gazy, fantsom-bokatra, sns.
Previous: Fitaovana fanaraha-maso pneumatika
Manaraka: Operatera fanaraha-maso ny valizy ambany
Fitoeran'ny solika tanker solika
Sarom-baravaran'ny fiara mifono vy